R/wasaare Khayre”Dowladda FS waxaa ay xoogga saareysaa dib u habeynta Hay’adaha Dowliga ah” – Radio Muqdisho
R/wasaare Khayre”Dowladda FS waxaa ay xoogga saareysaa dib u habeynta Hay’adaha Dowliga ah”
Ra”iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa saaka furay maalinka labaad ee shirka oo ka soconaya Muqdisho ayna ka qeyb galayaan ilaa 50 wafuud matalaysa dalalka iyo hay’adaha caalamiga ah.
Dooda shirka maanta oo soconaysa ayaa ku bilaabatay dib u habeynta hay’adaha dowliga ah,si gaar ah Dhaqaalaha iyo talaabooyinka loo qaaday horumarinta hanaanka maamul maaliyadeed ee dalka.
Mudane Xasan Cali Khayre R/wasaaraha XFS oo guddoominaya shirka ayaa furitaanka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay xoogga saarayso dib u habeynta hay’adaha dowliga,isagoo dhinaca kale uga mahad celiyay wafuudda caalamiga ah ee ka soo qeybgashey shirkan.
Wasiirka Maaliyadda XFS Dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlay shirka ayaa diirada saaray waxa ka qabsoomay dib u habeynta maamulka Maaliyadda iyo wadahadalka deyn cafinta halka uu marayo,wuxuuna muujiyay in meel wanaagsan ay wax u marayaan,ayna jiraan rajooyin iyo guulo lataaban karo.
Waxaa goob joog ah shirkaan qaar ka.mid ah madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda Fedraalka sida Madaxweynaha Koofur Galbeed, Madaxweynaha Horshabeelle, Madaxweynaha Galmudug iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho.